Cumar Filish oo dadka Muqdisho uga digay isticmaalka maandooriyaha | warsanradio baydhabo
Home WARARKA MAANTA	Cumar Filish oo dadka Muqdisho uga digay isticmaalka maandooriyaha
Cumar Filish oo dadka Muqdisho uga digay isticmaalka maandooriyaha
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu soo bandhigayay doorka ay dhallinyarada ku lee yihiin ololaha ciribtirka Maandooriyaha.
Munaasabadan oo ka dhacday xarunta aqalka Dowlada hoose ee Xamar ayaa waxaa kasoo qeyb galay boqolaal dhallinyara ah oo ka kala yimid degmooyinka gobolka Banaadir, iyadoo goobta lagu soo bandhigay Muuqaalo ka turjumayay howlgalda ay ciidanka Boliiska ka fuliyeen Caasimadda kaas oo lagu soo qabtay Daraagis kala duwan iyo dadkii ka ganacsanayay ololahaas oo si xoogan haatan uga socda degmooyinka Muqdisho.
Dhanka kale Hobolada fanka ee Dalmar Yare, Xuseen Nuuriyoo iyo kooxda Banaadir Band ayaa soo bandhigay suugaan kala duwan oo ka hadlayey dhibootinka gurcan ee laga dhaxlo Maandooriyaha iyo doorka dhallinyarada kaga aadan la dagaalankiisa.
Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Mudane Cumar Maxamud Maxamed (Cumar Filish) oo munaasabada ka hadlay ayaa tilmaamay in dhallinyarada Caasimadda ay laf-dhabar u yihiin horumarka iyo xasiloonida magaalada islamarkaana ay muhiim tahay ka qeyb qaadashada la dagaalanka Muqaadaraadka.
Cumar Filish oo dadka Muqdisho uga digay isticmaalka maandooriyaha was last modified: February 7th, 2022 by warsan radio
Jadwalka doorashada Shan kamid ah Golaha Shacabka oo la shaaciyay
Soomaaliya & Itoobiya oo ay ka wada hadlay la dagaalanka Al-Shabaab
Shirka Madaxda IGAD oo Maanta ka furmaya Nairobi & Somalia oo ka qeyb galeysa